Somaliland News - Waa sidee ra'yiga dadka daawadey cajalada radio lascaano?
Waa sidee ra'yiga dadka daawadey cajalada radio lascaano?
30 Sep, 2006 - Ugu horeyn cidii weli aan daawan cajalada waa inta aaney maqaalkan aqrin ay daawataa cajajalada, marka xiga cajalada oo la soo gaarsiiyay Radio Somaliland ugu horeyntii waanu ka naxney, balse markaanu dhowr jeer daawney waxa nagu soo boodey qeybo shaki na geliyay sida ruux la sheegayo in uu sheekh maxamed ismail yahay oo aan u muuqan ruux marxalada uu ku jiro ka welwelsan sida isaga oo qoslaya isla markaana aaney wax jirdil ahi jirkiisa ka muuqan. waxa iyana aanu ka fajacney sida cajalada loo jar jaray oo ay ka muuqato in dadka cajalada laga duubayo oo qaladaad ay galayaan oo shaki keeni kara dartood cajalada loo joojinayo. waxa kale oo iyana xusid mudan in RadioSomaliland ay cajalada uga soo baxdey in ninka suaalaha la weydiinayo iyo jawaabaha qaar aaney is waafaqsaneyn sida su'asha ah "sideed u aragtaa saaxiibtinimada somalilnad ee itoobia" oo uu ku jawaabay "nimankaasu waa niman xaq u dirir ah oo xaqooda raadsanaya" iyo isaga oo marka uu istuurayo u muuqda in uu amar ka qaadanayo ruuxa camerada daba taagan. Hadaba aqriste dib u daawo cajalada oo u kuur gal inta aanad go'aan gaarin.
Iminkana hadaan u gudubno sida dadku ay u arkaan cajalada waxa lagu soo koobi karaa afar mowqif:
1) dad iyagu wax walba oo soomaliland wax ka sheegaya ku soo dhaweeya gacmo furan oo arinta ka ah waraabe halkii loo eryaba waa halkiisii.
2) qaar iyaguna ku cagsigooda ah oo had iyo gooraale aaminsan in Somliland aaney qaladba geli karin, xitaa hadii runtu hor talo.
3) mucaaradka fogaadey ee iyagu fursad walba oo ay helaanxitaa hadii fursadaasi ay cadaw u soo bandhigo u isticmaala in ay ummadda inteeda kale ku yiraahdaan waataa Somaliland taad difaaceysey bal eeg waxa meesha ka dhacaya. "fadeexadu mucaarad iyo muxaafad ma leh."
4) iyo ugu dan beyntiina waxa jira dad qaba mowqifka ah ruuxa danbi gala ee damca ama dila ruux aan waxba galabsan iyo ruuxa kiyoo masaajid fadhiya la qabto ee la iska xiro isku si in loogu andacooda ma aha, ee hadii cadaalad laga hadlayo yaan kiiska la iska waalin ee aanu ka war sugno maxkamada socota. Gunaanad: Maxaa isku soo beegay cajaladan iyo xili magaalada beydhabo lagu qab qabtey culimo la sheegay in ka danbeeyeen qaraxii loo geystey C/lahi yusuf, isala markaana ay maxkamada digil iyo mirifle ay digniin arintaa ka soo saareen. saxaafadu arintaa ka mey hadal. maxaa ku soo beegay cajaladan xili dadyowga hawiye iyo digil iyo mirifle uu maamulka puntland ka mamnuucay in ay tagaan degaana tegaan maamulkaa halkaa ka taliya. xili xasan turki sheegay in maxkamaduhu ay hargeysa iyo berbera tegi doonaan, iyo ugu danbeyntii xili wadaado reer somaliland ah ay tegeen magaalada muqdisho. waa suaalo is weydiin mudan. Radio Somaliland